Lahatsoratra faha-1000 | Hevitra MPANOHARIANA
Arahabaina Jentilisa nahatratra ny faha arivo lahatsorany.
Momba ny fandikan-teny vahiny. Araka ny hevitro dia tsaratsara indraindray raha mampiasa teny fohy isika ho fandikana ny teny vahiny. Hitako tsara ohatra ny fimailo sy finday. Raha tena adika mantsy ny téléphone portable dia mety hoe "fiantsoana an-taoby fitondra mandehandeha". Lava loatra izany ary ny mahafaly dia resintsika ny frantsay tamin'io.
Nampidirin'i Toetra RAJA @ 14:13, 2011-08-23 [Valio]
Raja , Efa miezaka tokoa isika amin'io fitadiavana teny fohifohy io kokoa nefa tsy atao mampaninona ny teny lava, raha amiko manokana, tahaka ny an'ny Alemana... Raha hitanao ary ny fomba fanisa efa navoakako taloha fa anisan'ny fohy ihany koa saingy ny hanekena azy aloha dia lavitra be... Dia mankasitraka amin'ny arahaba sy miandry tsikera hatrany!!!
Nampidirin'i jentilisa @ 14:29, 2011-08-23 [Valio]
atabaina zany ra zoky a! mila tondrahana kosa zany kle! sa ahn
Nampidirin'i news2dago @ 16:40, 2011-08-25 [Valio]
Raha ny fahitako ny indigene
Raha ny fahitako ny indigene dia tompon-tany na tera-tany (hafa ny indigene t@ andron'ny fanjanahan-tany an!)
Nampidirin'i Desire Dauphin Rasolomampionona @ 08:54, 2011-08-28 [Valio]